धनी कसरी बन्ने ? – Rajdhani Daily
धनी कसरी बन्ने ?
भिखारी त्यो बन्ने हो जसले भिखारीको जस्तो विचार राख्छ । बारम्बार असफलताको कथा दोहो¥याउँछ र सफल बन्ने आँट गर्दैन । जो मानिस मनमा अविश्वास पाल्छ । लर्खराउँदै हिँड्छ । ऊ कसरी विजेता हुन सक्छ ? याद राख्नुस्, समृद्धितर्फ आफ्नो पैताला बढाउने साहसीहरूले नै धन कुम्ल्याउने हो ।
कुबेरको अक्षय भण्डार कहाँ छ ?
तपार्इंको मनमा ।
कारुको खजाना कहाँ छ ?
सुन र रत्नको खानी कहाँ छ ?
तपाईंको अन्तस्कणमा ।
आफ्नो विचारलाई बदल्नूस् । उठ्ने बस्ने, खाने पिउने, रहन सहनको ढंग बदल्नुस् । गरिबीमा बस्न नमान्नुस् । समृद्ध बन्न के गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुस् । आफ्नो पुरै शक्ति र योजना त्यो काम सफल गर्नमा लगाउनुस् । तब संसारको कुनै शक्तिले तपाईंलाई धनी बन्नबाट रोक्न सक्दैन ।
तपार्इंको विचार ठूलो होस्, तपाईंको कामना श्रेष्ठ होस्, तपाईंको महŒवकांक्षा महान् होस् । भाग्य नामको कुनै शक्ति छैन जसले तपार्इंलाई दरिद्र राख्न सकोस् ।
Tags: धनी कसरी बन्ने ?
गाउँपालिका अध्यक्ष बम नेकपाबाट निलम्बन (984)
मेडिकल कलेज विद्यार्थी ठगी प्रकरण : सीडीओलाई पत्र… (537)